Matio 18: 1-35
Matio 17 Matio 18 Matio 19
ka nanao hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Raha tsy miova hianareo ka tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy hianareo.
Koa raha ny tànanao na ny tongotrao no manafintohina anao, tapaho izy ka ario ho afaka aminao, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina na mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tànana roa sy tongotra roa, nefa hariana any amin'ny afo maharitra mandrakizay.
Ary raha ny masonao no manafintohinana anao, esory hiala izy, ka ario ho afaka aminao; fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa, nefa hariana any amin'ny helo mirehitra afo.
Mitandrema, fandrao manao tsinontsinona na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny hianareo; fa lazaiko aminareo: Ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan'ny Raiko Izay any an-danitra.
Fa tonga ny Zanak'olona hamonjy ny very.
Ahoana no hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato, ka mania ny anankiray, moa tsy hamela ny sivy amby sivi-folo eny an-tendrombohitra va izy ka handeha hitady ilay nania ?
Ary raha tàhiny hitany izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny sivy amby sivi-folo izay tsy nania.
Ary tahaka izany, dia tsy sitraky ny Rainareo Izay any an-danitra, raha ho very na dia izay aza amin'ireny madinika ireny.
Ary raha manota aminao ny rahalahinao dia mankanesa any aminy, ka rehefa mitokana hianareo roa lahy, dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha mihaino anao izy, dia efa azonao ny rahalahinao;
fa raha tsy mihaino anao kosa izy, dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba ho voaorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo ( Deo.19.15).
Lazaiko aminareo marina tokoa: Na inona na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia hovahana any an-danitra.
Ary lazaiko aminareo koa: Raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'ny Raiko Izay any an-danitra izany.
Dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe : Tompoko, impiry moa no hanotan'ny rahalahiko amiko, ka havelako izy? Hatramin'ny impito va?
Nefa nony nivoaka izany mpanompo izany, dia nahita mpanompo namany anankiray, izay nitrosa denariazato taminy, dia nosamboriny izy ka notraohiny sady nataony hoe: Aloavy izay trosako aminao.
Nefa tsy nety izy, fa lasa nampanao azy tao an-trano maizina mandra-pandoany ny trosa.
Dia nampanalain'ny tompony ralehilahy ka noteneniny hoe: Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko ilay trosa rehetra taminao, satria nifona tamiko hianao;
moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va hianao tahaka ny namindrako fo taminao?
Ary tahaka izany koa no hataon'ny Raiko Izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy hianareo.